BALAA AKKANAA WAAQNI ISIN HAA OOLCHU: Odaa Gurreetiin: Muuxannoo Imala Yunivarsiitii (moo Abjuudha?) – Beekan Guluma Erena
BALAA AKKANAA WAAQNI ISIN HAA OOLCHU: Odaa Gurreetiin: Muuxannoo Imala Yunivarsiitii (moo Abjuudha?)	Beekan Erena
Poems February 9, 2017
BALAA AKKANAA WAAQNI ISIN HAA OOLCHU: Odaa Gurreetiin: Muuxannoo Imala Yunivarsiitii (moo Abjuudha?)
Waggaa toorba har’aa jechuun bara 2011 keessa anatu Magaalaa Naqamtee ka’ee gara Magaalaa Jimmaa deemuuf oliif gadi jedha ture. Guyyaan deemsa koo geessee waa hunda galaa galaafadheen ka’e.
Ganama obboroo (barii) lafaa ka’eetan gara dhaabbata Konkolaataa Naqamtee adeemuu eegale. Meeshaan of harkaa qabu hedduu waan tureef kan dugdarratti baatamu dugdatti uddeelladhe,kan lafarra harkifamu lafarra gototaa akka nama samiitti ol ka’uu fakkaadhee qajeele.
Nan yaadadha tokko barii karaarraa Ispoortii hojjeta fakkaata ”Xafartanyaa” 😀 jedhee natti qoosee jira. Anis itti kolfee darbeen haga dhaabbata konkolaataa gahuttan jechuma kana yaadee kolfaa ittiin karaa butadhe.
Yommuun dhaabbata konkolaataa balbala isa guddaa karaa ganama barii namni ittiin seenuu irra gahu hiriirri namaa asii bahee iddoo ati jirtu kana gaha.
Anis ofirraa meeshaa lafa kaawwadheen dhidhiibboo namaa kana sodaadhee irraa siqee dhaabbachuu eegale. Osuman dhaabbadhee ija asii fi achi oofuu mucaa xiqqaa Sigaaraa,akaayii,loomii gurguru takka argadhe. Akkasan jedheen <> mucaanis toole jedhee fiigee deeme.
Egaa balballi gaafa banamu nama isa jabaa fi irraa hafetu karaa deema. Dhaabbatni konkolaataa Naqamtee ofkoltii cimaa barbaada. Anis egaa abbaa qarshii kudhanii waanan ta’eef laphee koo dhiibeen suuta eeguu itti fufe.
Yeroo balballi banamuuf jedhu namichi keessaa achii as deemaa dhufee ajaja laachuu eegale. <> jedhee balbala banuu fi namicha kuffisanii irra yaa’uun takkaa ta’e.
Anoo suuta seeneen gara olii naannoo biiroo geejjibaattin ol adeemuu eegale. Kana gidduun mucaan xiqqaan iddoo naa qabee asii gadi natti furguggifamaa dhufe. <> naan jedhe.
Anis itti kennee kan na harkaas geessee duuba konkolaataa keessa ergan tuulee booda waan karaa irratti afaan tolfadhu barbaada gara alaa bahuuf yommuun jedhu mucaan bakka naaf qabe qarshii na gaafate. Anis qarshii isan jedhetti dabalee kenneefiin guyyaa gaarii qabaadhu jedhee of biraa deemsise.
Yommuun balbala biiroo geejjibaa gidduun gara alaatti baatuun bahee waa bibbitadhee dhufu namicha shaanxaa guddaa harkifamu baatee dhaabbatee boo’u tokkon arge.
Itti siiqeen maal taate jedhee gaafadhe. Innis <<daa’ima kootu na jalaa bade as keessatti>> jedhe. Ani ilmoo dhiiraa imimmaan buusu bira darbuu waan hin dandeenyeef maal si gargaarun jedheen. <> naan jedhe. Toole jedhee harkaa fuudheen dhaabadhe.
Erga namichi na biraa sokkee daqiiqaan 20 gubate. Osuman dhaabadhuu konkolaataan bahuu eegale. Anis gatee deemuuf rakkoo natti ta’e. Rakkoo kan koo caalaa waa’een namicha dhala gate kanaa ulfaa seexanaa natti ta’e.
Kana gidduun naannoon koo Poolisiin kan marfamen arge. Poolisii keessaa inni tokko natti as deemee dhufee waraqaa eenyumaa erga baaseen booda shaanxaa kana sakatta’uuf deemna atis to’annoo jala ooltee jirta naan jedhe.
Anis iddoon jirun wallaale,afaan kootti ashabootu guute,dubbachuu hin dandeenye. Jarris Shaanxaa kana banuuf yeroo jedhan furtuu cimaan cufamee waan jiruuf nyaat-muraadhaan kutanii banan.
Yeroo banan ija koo amanuun dadhabe. Nan rifadhe,lafan jirutu natti naann’ee Volkaanoon waan dhohe natti fakkate. Shaanxaa sana keessa namichi daa’ima ajjeesee kaa’ee baatee deemaa ture. Ammaan booda abdiin kutadhe. Waan namni godhetti ani gaafatamuufan deema jechuu dha.
Harki koos walitti hidhamee shaanxaan meeshaa biraan fe’amee anis konkolaataa biraan fe’amee yeroo muraasa booda Siree koo doormii ”H” balbala sadaffaa keessatti argamu irrattan of bare 🙂
← Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!
QOOSAAWWAAN BASHANNANSIISOO TOKKO TOKKO-Oroliyana Daniel’ →